အိပ်မက်တွေအတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမင်းကြားနိုင်တဲ့လိမ်လည်မှု ၈ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒံယလေက | | အကွောငျးရငျး
မင်းကမင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်လာပြီးသင့်ကိုပြောတဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုမှာ ၀ င်နေတယ်ဆိုတာမင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးပါသလား မင်းရဲ့အချိန်ဆုံးရှုံးနေတာလား။ သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်အရ၊ သင်လုပ်တာဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။
မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေအတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမင်းကြားနိုင်တဲ့လိမ်လည်မှု ၈ ခုကိုငါချန်ထားခဲ့တယ်။
၁။ အခြားအချိန်တွင်သင်အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ ယခုတွင်သင်သည် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
နောက်တစ်ခါလား အခြားအချိန်ကဘယ်တော့လဲ ငါအဓိပ္ပာယ်၏မရှိခြင်းမကြိုက်ဘူး။ ပြောတာက "အချိန်တန်ရင်မင်းမေ့သွားမှာပါ" ဒီနေ့မင်းအသက်ရှင်နေ၊ မနက်ဖြန်၊ ဘယ်သူသိလဲ အိပ်မက်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတာကဘဝအကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်တာဝန်မဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
အမှား! အဆိုးဆုံးကိစ္စမှာ၊ အလုပ်မလုပ်လျှင်သင်ယခုလုပ်နေသကဲ့သို့လုပ်လိမ့်မည်။
၃။ အလုပ်မှမထွက်ခြင်းက ပို၍ လုံခြုံသည်။
သေချာတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုတာဘာလဲ? အိမ်သို့ပြန်သွားပါ၊ အိမ်မက်ထဲ၌သင်၏အိပ်မက်များကိုသုတ်လိမ်းပါ၊ ဘယ်တော့မှဘယ်သောအခါမှမစွန့်ခွာရန်သင်၏အိပ်ခန်းတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ပါ။ သတိရ၊ ပိုလုံခြုံသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကြည့် ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဇတ်ကောင်တွေဟာဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာအနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့တယ် သည်အထိနည်းပညာသည်သူ၏တံခါးကိုခေါက်။ စက်ရုပ် exoskeleton ကြောင့်သူသည်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည်။
သင့်တော်သောအရင်းအမြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်မဟုတ်ပါ။ Stevie Wonder သည်မမြင်နိုင်သောကြောင့်သူသည်ဂီတအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာကြားနာခြင်းကိုအသုံးချပြီးယခုတွင် Grammys 25 ရှိနေသည်။ မင်းနားလည်လား? 😉
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းတဲ့လူအနည်းငယ်ကဒီဟာကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အူကြောင်ကြောင်တွေရှိခဲ့လို့ပဲ။ သူတို့မှာသင်၌ရှိသည်နှင့်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း။ သငျသညျသူတို့ထဲကတစျခုဖွစျနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာမင်းအပေါ်မှာသာမူတည်တယ်။
၇။ ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ရန်သင်ငွေပိုမိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်။
မင်းပိုက်ဆံမလိုတော့ဘူး။ သင်အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်။ ဘတ်ဂျက်လိုတယ် သင်၏ဘဝတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးစရိတ်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ "ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်ပန်းတိုင်သို့ချဉ်းကပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ယခုရှိသည့်ငွေကြေးနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်အချိန်တွင်လုပ်နိုင်သနည်း။ "
သို့သော်၎င်းသည်မထိုက်တန်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုသည်အဓိကအချက်တစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည် - သင်သည်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုရှာဖွေသည်။ သင်သည်သင်၏ကိလေသာနှင့်အိပ်မက်ကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါခက်ခဲသောအလုပ်သည်မခက်ခဲပါ။
သတိရ: မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေအတွက်တိုက်လှန်ပါ (ဗီဒီယိုကြည့်သည်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » အကွောငျးရငျး » 8 သင်အိပ်မက်တွေအတွက်တိုက်ခိုက်နေသည့်အခါသင်ကြားနိုင်သောမုသာစကား
ငါ့ကလေးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက် ၁၅ ချက်